बमजनको बेडरुममा के भेटियो यस्तो, प्रहरी परे चकित,बमजनको आश्रममा के देखियो ? जस्ताको त्यस्तै, तथ्य बाहिरएपछी प्रहरी पनि चकित…(भिडियो)
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद कोमल ओलीले तपस्वी भनिने रामबहादुर बम्जनले महिलामाथि हिंसा गरेको सार्वजनिक हुँदा पनि पक्राउ नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
गर्भवती हुँदा किन लाग्छ वाकवाकी ?
पोखरामा रोएका भी-टेनलाई झापाको कन्सर्टमा सरप्राईज, भिडलाई छिचोल्दै एक युवती पुगिन भी-टेनलाई भेट्न स्टेज – भिडियो हेर्नुहोस